Namuhla sifuna ukutshela umfundi opharetha tour in Sri Lanka iyona enokwethenjelwa kakhulu futhi wenze nenzuzo. Kodwa okokuqala amagama ambalwa ngawe holide. Uma ungazange waba kulesi siqhingi emangalisa, awukwazi ngisho azi ukuthi lo manje ngokuthi eCeylon.
Kukhumbuleni nje itiye elimnandi, okuyinto kubhekwa the best yonke imikhaya. Ezinsukwini zethu, Sri Lanka ilahlekelwe simo sayo njengemholi umholi ngokuphelele nokukhishwa siphuzo esithandwayo, kodwa namanje uhlala phezulu ezintathu kwekulu abakhiqizi ayo. Tea emasimini nesikhundla wesithathu lesi siqhingi, futhi uyokwazi ukuwabuka. Kodwa akunjalo konke inganikeza opharetha tour in Sri Lanka.
Amagagasi ofudumele-Indian Ocean, amakhilomitha amaningi amabhishi, ithuba elikhulu diving kanye ukuntweza phezu kwamagagasi, izimila zikanokusho kwehlathi, ithele izithelo eziningi kanye izikhumbuzo zemiphakathi yesikhathi esidlule - konke lokhu kungaphezu ukukhangisa Bounty. Lona ngokoqobo, ngesikhathi esifanayo becabangela okungale kwalokho nobukhulu bayo.
ICS Izikhangibavakashi Group
Lena enkulu tour operator eSri Lanka. Inkampani okuhlukahlukene nge emnandi kakhulu emakethe izivakashi. Indaba yempumelelo kuyaqhubeka kusukela ngo-1992. idumela Esitebeleni umngane esitebeleni nokunokwethenjelwa ivumela Ukukhetha okubanzi uzijabulisa inkampani ukunikeza amakhasimende ayo amadala namasha. ICS Izikhangibavakashi Group - ingaphezu 20 neminyango kanye nezinsizakalo nabasebenzi abangaba ngu-150 isimo. Lokhu opharetha tour in Sri Lanka ihlukile lihle idumela zezimali.
Ikomkhulu eMoscow, ngaphezu, amahhovisi Petersburg, kanye namahhovisi yokuthengisa e kunenqwaba yamadolobha. abaphathi abanolwazi uzokutshela ukuthi kulesi siqhingi izinkambo nazo izinhlelo ezithakazelisayo uhambo. Iningi ezikhangayo bayasonta ngokwemvelo, kodwa ukuthi ningabi kancane kakhulu noma ezithakazelisayo. Izindiza eziya Sri Lanka zivela eMoscow. Uhambo isilinganiso izindiza kanye yokuhlala ehhotela ekhethiwe kubiza ruble 200 000 ngezinsuku ezingu-14.
Premium Travel Ikhamphani
Lokhu Kazakhstani tour operator eSri Lanka, okuyinto likhula ngesivinini kanye ukuzuza in ukuthandwa. Ukuqhathanisa izinkambo esiqhingini libalele nezinye izipesheli, singasho ukuthi Ziyathakazelisa. A uhambo izinsuku 8 kusukela ruble 20 000, ngaphandle ukudla futhi izindiza. Inkampani langena emakethe ngo-2005, okungukuthi, isivele engu-11 ubudala. Kuze kube manje, phakathi phezulu ezinhlanu Kazakhstan futhi ngokushesha kuyanda phesheya. Lena yingcweni travel inhlangano yinkimbinkimbi ahlukahlukene.
Tour opharetha UnexTour
Abaningi bakholelwa ukuthi kuyinto lapha - tours engcono Sri Lanka ovela ku-opharetha tour. Izibuyekezo yemisebenzi yayo ngakho okuhle, kunzima ukusishaya indiva. UnexTour inikeza iholide ehleleke kahle kulesi siqhingi esimangalisayo. Ikakhulukazi phakathi abahambi kukhona izinkambo ethandwa edolobheni resort of Moratuwa futhi Galle, izikhumbuzo zomlando Kandy, Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, futhi yokungcebeleka entabeni Nuwara Eliya. ukunakwa UnexTour kakhulu Uhambo, ekuqaleni ukunikela izivakashi ithuba lokuvakashela amapaki amahle kazwelonke nezindawo esikhumbuzo emlandweni futhi yokwakha nobuBuddha.
opharetha Esinokwethenjelwa Tui Group
Unentshisekelo okungcono tour opharetha eSri Lanka ngo eMoscow? Khona-ke unake leli qembu izinkampani, okuyinto anesikhundla okuholela ezokuvakasha ezimakethe zomhlaba. Yasungulwa ngu nokuhlanganiswa opharetha ezimbili ezinkulu kakhulu: German Tui AG waseBrithani Tui Izikhangibavakashi PLC. Lokhu duo kuzodala izimo esihle kakhulu izivakashi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yenqwaba oda inkampani angakwazi ukukhokhela ukunciphisa amanani bese uwenza atholakalele izivakashi.
I izinkambo ethandwa kakhulu ngokusebenzisa Tui Group
Ingabe ufuna ukuchitha impelasonto okuphumuzayo? Khona-ke uyoba Waikkal. Le ndawo ethokomele ngasedolobheni Negombo. Wayebonakala yakhelwe ngokwemvelo ukuze chtobly ukwelapha kwakho kusukela monotony zokuphila kwansuku zonke. Izindleko izinsuku ezintathu ne indiza komuntu oyedwa - 43 700 r.
Beruwela - yokungcebeleka enkulu ku ugu fabulous. Tui Group inikeza ithuba lokuhlola iminikelo zakamuva Sri Lanka nke opharetha hambo, ngenxa uhlelo nokubambisana. Uma sikhuluma nabanye abantu Beruwela, lokhu kuyinto edolobheni alibaleke elikhanyayo kakhulu ukuthi uzokunika kwagxila kuwena. Izindleko izinsuku ezintathu - ruble 42 000.
Wadduwa - ipharadesi langempela labo alangazelela imvelo acwebile futhi akusoze kwalibaleka. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona itholakala eduze Colombo. Sea futhi engapheli amabhishi, isihlabathi esithambile futhi izithelo ezingavamile ezimele wena nsuku zonke, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Tour opharetha "Maldiviana"
kungazelelwe omisa iwindi ku ekuphileni kwansuku zonke izisebenzi, futhi inhloko banikezwa ithuba ukuthatha iholidi? Khona-ke evutha izinkambo Sri Lanka kusukela tour operator "Maldiviana" - Yilokho kanye okudingayo lokhu. Zona kanye igama lenkampani, kusho ukuthi abasunguli bakholwe - the Maldives liyindawo engcono kunazo zonke ukuze uhlale phansi. Abaphathi ochwepheshe yangempela noma isiphi isiqondiso: Nega Beach, ukubona indawo, diving - Safari, noma iyiphi inhlanganisela yako. Amanani for Sri Lanka futhi Maldives akuzona ngokweqile.
Bhala ulandelanise konke izinkambo kungenzeka kulesi siqhingi imilingo kungenzeki, ngakho umphumela ngokwethu ukuze edume kunazo nabathandwayo, zikhanga izivakashi.
Ibhishi iholide izinsuku 9 izobiza izivakashi $ 1,000 ngesikhathi okufana Ukuhamba kusuka eMoscow. Intengo kuhlanganisa indawo yokuhlala ehhotela kanye ukudla, futhi imali.
Uhambo zincike okuthandayo. Ihlanganisa nanoma iliphi iholide inketho ekhethiwe. Lokhu adventure okunethezeka "Candy Mystic", "Ngo-ezinyathelweni Indiana Jones," "isiko waphakade" noma "Imigwaqo yamakhosi Sinhala." Ngayinye yalezi zindawo ithakazelisa kakhulu, okuthakazelisayo futhi ulwazi, ngakho-ke uma uhlela ukuvakashela isiqhingi libalele izikhathi eziningana, ungakhetha ngokuphepha ezamehlela ezahlukene.
"Expedition": ukuphumula ngokuhlakanipha
Iningi tour opharetha e Sri Lanka kukhona sikhathazeke kuphela ngalokho yokuthi izivakashi ezishukiwe futhi kahle nakupalis echibini. Phela, isiqhingi lifana eziphonsa ku inganekwane, okuyinto kudingeka sitadishe futhi baqonde ikhasi nencazelo yalo imfihlo. I-Ayurveda, ifilosofi, ijwayelekile abaningi ngegama nje, livela lapha. Kuye izintandokazi zakho, ungakhetha izinkambo ne Ukuvakashela Colombo. Kuyinto inketho for the shopaholics. Ngoba umuntu esebenzayo kufanele bakhethe nokuhamba ehlathini acwebile ne inkombandlela abanolwazi. Futhi ukwenza abathandi suit exotic ukuhamba ku indlovu epulazini ogibele phezu imidondoshiya ethule. Tour Operator "Expedition" asiqaphelisa yakho ezindaweni ezilandelayo:
Uhambo e Sigiriya. Lena entabeni enkulu, eshaya ngenxa yobuhle balo. Kodwa hhayi kuphela ukuthi izivakashi. Libuye libe inqaba of the gama elifanayo, elakhiwa ngekhulu lesi-5. Ukuze ezisekhona izingadi ezinhle kakhulu nemithombo, kanye fabulous sobukhosi umbusi. ezitebhisini abahlukile kuholela esiqongweni sentaba. Climbing kuya phezulu, ungajabulela emanxiweni enqabeni endala futhi ichibi lasendulo.
Izikhangibavakashi e Kandy - inhloko-dolobha yesiqhingi, edolobheni eminingi yasendulo futhi ezithakazelisayo. Lapha ungavakashela omangalisayo Buddha Temple futhi simazi izindawo zokukhulekela izithombe zalo. By endleleni, lapha ungakwazi ukuthenga amadayimane noma amapharele amahle.
Izikhangibavakashi ejensi "owokudabuka Tour"
Lena indawo enhle kakhulu tour operator (Sri Lanka) kusuka eYekaterinburg. Uma kusukela enhlokodolobha eziqhingini romantic engafinyelelwa ngaphandle kwezinkinga, kodwa ukuhamba kusuka kwelinye idolobha angaba nezinkinga. Bheka "owokudabuka Tour". inkinga Direct lwabaphathi - iwukukhetha ngawe ukhululekile kakhulu iholidi inketho. Le nkampani inikeza wena ngqo emoyeni izindiza noma izindiza yokuxhuma, konke kuncike isifiso sakho.
Tours of Sri Lanka, akukho nsuku zonke, kodwa uma ungenalo ulwazi uzimisele ukulondoloza futhi kungaba ulinde ithuba, shiya inombolo yocingo umphathi contact futhi uzokofonela emuva. hot izinkambo intengo iqala ruble 43 000, futhi kuncike iphakethe ukuthi babeka.
"Iqembu Lead zezivakashi"
Lokhu multidisciplinary, tour operator, okwase kuphele iminyaka engu-14 emakethe ikufakazele uqobo ngendlela engcono. Namuhla inkampani uqinisekisile kusukwe phezu amabhlogo eMoscow eYekaterinburg, Rostov futhi Samara. abaphathi abanolwazi ngeke ukukunikeza ukuhamba ezithakazelisayo ngokusebenzisa Sri Lanka futhi eMalaysia, eSingapore kanye ePhilippines, Indonesia naseTanzania. Izilokotho yakho ngeke kucatshangelwe nokuhumushela olimini adventure ezimangalisayo esiyokhunjulwa for a lifetime.
Finyeta, singasho ukuthi, kwenzekani isiqhingi exotic, kungcono ukuphathisa iholidi opharetha wakho waba nayo ngabangane. Lokhu kuqinisekisa yalokho omkhulu izindleko aphansi, kanye ukungabakhathaleli nhlobo isipiliyoni.